यी ५ सपनाहरु झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाउनुहोस् ! – ताजा समाचार
यी ५ सपनाहरु झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाउनुहोस् !
प्राय मान्छेहरु रातको समय मा देखेको सपना विहान उठ्नासाथ आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यलाई सुनाउने गर्छन। यसरी आफूले देखेका सपना सुनाउने गर्दा क हुन्छ ?
१.आफूलाई मृ”त अवस्थामा देख्नु भएमा :
यदि तपाईले निन्द्राको समयमा आफैलाई मृ”त अवस्थामा देख्नुभएमा धेरै डर लाग्न सक्ने भएपनि अन्यन्त शुभ हुने गर्छ। यो सपनाको अर्थ तपाईका जीवनमा आइपरेका हरेक समस्याहरुको अन्त्य हुँदै जानेछन्।
तपाईले निन्द्रामा यस्तो सपना देख्नु धेरै शुभ हुने गर्छ। यसरी सपनामा बलिरहेको दियो देख्नु भएमा तपाईको जीवनमा नँया-नँया अवसरहरु प्राप्त हुँदै जानेछन र यसको साथमा कुनै देव देवता प्रकट भएको देख्नुभएमा तपाईको जीवनमा ठूलो सफलता मिल्नुको साथै सधैंब खुशीयाली छाउन सक्छ।मिडिया एनपी